eSancharpati | ज्योतिष शास्त्रअनुसार जन्म समयका आधारमा तपाईको भाग्य !! - eSancharpati ज्योतिष शास्त्रअनुसार जन्म समयका आधारमा तपाईको भाग्य !! - eSancharpati
ईसञ्चारपाटी २०७७ फाल्गुन २३, आईतवार
आइतवारको दिन यि मन्त्रको उच्चारण सहित उपासना गर्नाले मिल्नेछ चमत्कारीक लाभ !!:हिन्दु धर्ममा हरेक दिनको उत्तीकै महत्व हुन्छ । हरेक दिन कुनै न कुनै देवताका विशेष दिनका रुपमा पुजाआराधना गरिन्छ । आइतवार सुर्य भगवानका लागि विशेष दिन हो ।
हिन्दु धर्ममा सुर्य सबै देवताहरू मध्य एक हुन्– सूर्य देव । धार्मिक मान्यता अनुसार आइतबार सूर्य देवको लागि महत्वपूर्ण दिन मानिन्छ । यस दिन सूर्य देवको उपासना गरे लाभ मिल्ने धार्मिक विश्वास गरिन्छ । सूर्य देवको विशेष दिन भएकाले धार्मिक मान्यता अनुसार आइतबार विशेष मानिएको हो । मनोकामना पूर्ण गर्न मनुष्यले सूर्यको उपासना गर्नुपर्ने सूर्य पुराणमा उल्लेख छ ।